Uchwepheshe we-Semalt uchaza indlela yokuvikela ikhompyutha yakho kusuka ku-Botnets
U-Nik Chaykovskiy, i-8 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, uthi ama-imeyli ogaxekile abe yinto evamile kubo bonke abasebenzisi be-intanethi. Abasebenzisi abaningi be-inthanethi bathola ama-imeyili amaningi ogaxekile nsuku zonke ngokuvamile afinyelela kufolda yogaxekile. Ngenxa yezihlungi zogaxekile zanamuhla, abasebenzisi bangakwazi ukuqeda ama-imeyili amaningi ogaxekile. Omunye angase azibuze ngomthombo kanye nesisusa salokhu ku-imeyili yama-spam. Ezimweni eziningi, la ma-imeyili avela ebhodini. I-Botnets ingenye yezinsongo ezimbi kunazo zonke zokuphepha kwesiphequluli. Emuva nje, i-FBI ibike ukuthi e-US, amakhompi angu-18 ayekethwa yibaduni njalo ngomzuzwana owodwa.
I-botnet iqukethe amakhompiyutha amaningi e-zombie, alawulwa ngumhlaseli, ngokuvamile ngaphandle kwesaziso somnikazi. Umhlaseli wenza i-bot bese uyithumela kula ma computer. Kusuka lapha, bangathumela umyalo bese belawula amasignali e-C & C kusuka kuseva. Ikhompuyutha ethintekile yi-malware ayisekho ngaphansi komyalo womnikazi. Umhlaseli manje angenza umyalo ofana nokuhlaselwa kwe-DDoS kuwebhusayithi ethize. I-bot yenza i-unit functional ye-botnet. Ukusuka ekukhokheni lolu hlelo lokusebenza, umhlaseli usebenzisa isikhwama esimnyama ukumaketha kwe-digital kusho ukuyifaka efakwe kwikhompyutha yesisulu. Ezinye zezinyathelo ezisetshenziswayo zibandakanya ukuhlambalaza futhi ushintshe izikhangiso. Ngokwesibonelo, izinhlelo zokusebenza ze-Facebook ezivela emithonjeni enonya ngokuvamile ziqukethe amafayela anesifo. amanye amacala, laba bantu bathumela ama-imeyli ogaxekile. Amanye alawa ma-imeyili afaka amaTrojans, amafayili anegciwane noma izinamathiselo. Uma ufaka i-malware kwikhompyutha yesisulu, umhlaseli kufanele asebenzise uhlelo lwabalayishi endaweni eyikude ukuze athumele imiyalo kubhu. Inethiwekhi ye-botnets ingaqukatha ama-bots angaphezu kuka-20,000 asebenza umsebenzi ofanayo. Umhlaseli uthumela ukutheleleka kumphathi nokulawula (C & C) iseva ngokusebenzisa:
I-C & C yokubota: Le ndlela ihilela ukuthumela imiyalezo kwinethiwekhi ye-bots nokuyithola ngqo kuseva. Kuyindlela yokuxhumana eqondile.
Nontanga ukubuka. I-bot ingaxhumana ngqo nomunye u-bot. Lokhu kwakha indlela enezingqimba yokuthumela imiyalo nokuthola impendulo. Kule ndlela, i-bot-master ingakwazi ukulawula ibhodlela lonke.
Hybrid: Leli qhinga lihlanganisa inqubo emibili echazwe ngenhla.
Uma usungula i-botnet ephumelelayo, umhlaseli angenza i-cyber-ubugebengu njengokuntshontsha idatha yakho. Ulwazi lomuntu siqu olufana nama-imeyli namaphasiwedi angadlulela ngalezi zindlela. Ngokujwayelekile, ukwebiwa kwekhadi lesikweletu, kanye nokulahlekelwa kwamaphasiwedi, kwenzeka ngokuhlaselwa kwe-botnet. Abasebenzisi abagcina idatha ebucayi njengeziqinisekiso zokungena ngemvume, ulwazi lwezezimali kanye nobungozi be-inthanethi yokukhokha inhlawulo ukuze bahlaselwe laba baduni.